Xiddiga Ay Isku Heystaan Real, United iyo Barca Oo La Ogaaday Qiimaha Lagu Heli Karo – Garsoore Sports
Xiddiga Ay Isku…
Kooxda kubbada-cagta ee Sevilla ee dalka Spain ayaa dejisay qiimo bilow ah oo u dhexeeya 65 ilaa 70 milyan oo ginni oo ay ku dooneyso daafaceeda aadka loo qiimeeyo ee Jules Kounde, iyadoo Manchester United, Barcelona iyo Real Madrid ay isha ku hayaan inay xagaaga u dhaqaaqaan xiddiga reer Faransa.
22 jirkan qandaraaska uu haatan kula jiro Sevilla ayaa lagu burburin karaa 80 milyan oo ginni (£ 69m), laakiin dhawaan ayuu muujiyay rabitaankiisa ah inuu u dhaqaaqo koox weyn, isagoo cadaadis ku saaraya kooxda reer Spain inay iska iibiyaan.
Mundo Deportivo ayaa ku waramaysa in Sevilla ay dejisay qiimo u dhexeeya 65 milyan oo ginni ilaa 70 milyan oo ginni, iyagoo isku diyaarinaya xagaaga si ay gorgortan ula galaan kooxaha culus ee reer Yurub ee xiiseeynaya xiddigan.
Kounde ayaa shaaca ka qaaday inuu hami weyn u hayo inuu u ciyaaro koox weyn oo ka dhisan qaaradda Yurub, waxaana uu si maldahan u yiri ‘waan arki doonaa waxa mustaqbalka dhici doona.’
Kounde ayaa kasoo dhalaalay labadiisii xilli ciyaareed ee La Liga, isagoo soo bandhigay inuu yahay mid ka mid ah daafacyada ugu fiican ee soo socda qaaradda Yurub. Qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah ayaa xitaa soo jiitay tababaraha qaranka Faransiiska Didier Deschamps, kaasoo xiddigan kusoo daray liiska cayaartooydiisa 26ka ah ee uga qeybgalaya Tartanka Qaramada Yurub.
Arsenal Mise Real – Martin Odegaard Oo Shaaca Ka Qaaday Halka Uu Doonayo Inuu Ka Cayaaro Xilli-cayaareedka Dambe